Diyo post :: टेबल टेनिसका 'क्रेजी' राजेन्द्र दुलालको खेलसँग प्रेम : 'मेरो रगतमा खेलकुद छ' टेबल टेनिसका 'क्रेजी' राजेन्द्र दुलालको खेलसँग प्रेम : 'मेरो रगतमा खेलकुद छ' - Diyo post
टेबल टेनिसका ‘क्रेजी’ राजेन्द्र दुलालको खेलसँग प्रेम : ‘मेरो रगतमा खेलकुद छ’
कुनै समय युवा पर्यटन व्यावसायी राजेन्द्र दुलाललाई टेबल टेनिस खेल्न पाए संसार जितेको जस्तो लाग्यो । तर, पारिवारीक बाध्यताले उनले आजभन्दा १५ वर्ष अघि खेल जीवन त्याग्त बाध्य भए । त्यतिबेला उनलाई खेलकुद प्रति विश्वासघात गरेको जस्तो लागेको थियो । तर, अहिले उनी फेरी खेल जीवनमा फर्किएका छन् । करिब चार वर्षअघि देखि टेवल टेनिस खेलमा पुन सक्रिय रहेका उनी अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघको सचिव पदमा कार्यरत पनि छन् । ठमेलमा पर्यटन व्यावसायसँगै टेबल टेनिसमा सक्रिय रहेका उनले आफ्नो खेल जीवनबारे यसरी सुनाए ।
बाल्यकाल देखि नै म खेल प्रेमी हुँ । बुढानिलकण्ठ स्कुलमा पढ्दा देखि नै मैले ईन्टर–स्कुल च्यापीएन, जिल्ला स्तरीय च्याम्पीयन हुँदै राष्ट्रिय च्याम्पीयनसम्म खेलेँ । मलाई टेबल टेनिसमा निकै रुची छ । हाम्रो घर नजिकै सिमेन्टको बोर्ड थियो । त्यतिबेला सबैले ‘ट्रेनिङ गर’ राम्रो हुन्छ भनेर उत्प्रेरणा दिनुभयो । त्यतिबेला फूटबल भन्दा बढी क्रेज टेबल टेनिसमा थियो । ईन्टरकलेज च्याम्पीयनसिपमा हेर्न आउने दर्शकहरु पनि टनाटन हुन्थ्यो । राजेन्द्र कपाली भन्ने टेबल टेनिसको राम्रो खेलाडी हुनुहुन्छ । उहाँकै प्रेरणाले पनि मलाई टेबल टेनिस खेल्न उत्प्रेरणा दियो । ‘तिमी राम्रो खेल्छौ’ तिम्रो खेलमा भविष्य छ,’ उहाँले भन्नुहुन्थ्याे । खेल्दै गर्दा कलेजसम्म राम्रो खेलाडी थिएँ ।
ठमेलमा हाम्रो रेष्टुरेन्ट नै ९ वटा थियो । ‘डान्सबार सात वटा’ थियो । दुई वटा दोहोरी थियो । यो व्यवहार पनि सम्हाल्नु पर्ने अवस्था आयो । मेरो खेल जीवनको उर्वर समय २३ वर्षको उमेरमा व्यावसायले च्याप्न थाल्यो । अनि मैले नचाहाँदा नचाहाँदै खेल जीवन छाड्नुपर्ने अवस्था आयो । व्यावसायकै कारण १५ वर्ष मैले खेल्न सकिन ।
ब्यावसायमा लाग्नाले खेल जीवन छाड्नु प¥यो । ठमेल राजधानी भित्रको पनि राजधानी हो । यहाँ हुने पर्यटन बजार निकै लोभलाग्दो छ । त्यो लोभले मलाई पनि छोडेन ।
ग्यापको बीचमा मैले खेलकुदलाई अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था थिएन । दिनमा ट्राभलको काम रातमा रेस्टुरेन्टको काममा जानुपर्ने हुन्थ्यो । मध्येरातसम्म काम गर्नुपर्दा विहान उठ्नै नसकीने अवस्था हुन्थ्यो ।
त्यतिबेला मैले खेलप्रति विश्वास घात गरेको जस्तो अनुभूति भयो । अहिले लाग्छ ‘खेलमा लाग्नु पर्ने थियो । सबैकुरा पैसा होईन रहेछ । त्यतिबेला व्यापार र पारिवारीक वाध्यता आइलागेपनि यतिबेला मेरो रगतमा खेलकुद छ । म विजनेशमा आएपनि कसरी समय निकालौं ? कसरी खेलौं भन्ने उकुमुकस हुन्छ । आफ्नो शरिरलाई कसरी फूर्तिलो बनाउँ भन्ने सोँच आइरहन्छ । व्यापारमा लागेपछि आफ्नो अन हेल्दी भाको जस्तो लाग्यो । अब म खेलमै लाग्छु र स्वास्थ्य बन्छु भन्ने लागिरहन्छ । १५ वर्षपछि फेरी म खेल जीवनमा फर्र्किएँ । खेल जीवनमा फर्किदा मलाई आफैलाई खुसी लाग्यो ।
करिब चार वर्षदेखि फेरी म टेवल टेनिस खेल्न थालेकाे छु। ‘ब्याक’ भएपछि सिनिएर गेम खेलेँ । अहिलेसम्म तीनवटा राष्ट्रिय गेम खेलको छु । चार वर्ष भयो निरन्तर खेल्न थालेको तर, अब मैले राष्ट्रिय गेम खेल्न पाउँदिन किनकी म खेलकुद संघमा पनि छु । अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघको सचिवमा छु । संघमा अावद्द भएकाे खेलाडीले खेल्न पाउँदैन ।
व्यावसाय छोट्याउँदै छु
अहिले रेस्टुरेन्ट बेचेँ । आजकाल साँढे ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म लैनचौरमा गएर खेल्छु । लैनचौरमा गएर खेल्छु । प्रतियोगिताहरुमा भाग लिने क्रम अहिले रोकिएको छ । म भन्दा राम्रो खेलाडीहरु छन् । म अहिले हेल्थ बनाउन खेलिरहेको छु । मेडलको लागि होईन । म संघमा आवद्ध भएको हुनाले पनि यो टेबल टेनिसलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिइरहेको छु । यो खेललाई उचाइमा लानु छ । बितेका दिनहरुमा कुनै क्यालेन्डर थिएन । वर्षमा दुईवटा गेम हुन्थ्यो । खेलाडीहरुले गेम खेलेपछि प्रतियोगिताको वा कम्पिटिशनको अपेक्षा गर्छन् । अहिले त्यसलाई अघि बढाउँदै छौँ । चाँडैभन्दा चाँडै क्यालेन्डर पनि बनाउँदै छौं । वर्षमा ८ देखि ९ वटा गेम गर्ने योजना छ । दशै तिहारको उपलक्षमा केटाको लागि एउटा पल्सर बाइक र केटीको लागि स्कुटीको उपहार राखेर टुर्नामेन्ट गर्दैछौं ।
टेवल टेनिस हेर्दा एउटा सानो बल हो । तर, त्यो आँखाले र हातले खेल्ने गेम हो । विश्वको सबैभन्दा फास्टेस्ट गेममा पर्छकी जस्तो लाग्छ । यो खेलबारे नेपालका संघमा बस्ने मान्छेहरुले पनि राम्रोसँग डिस्प्ले गर्न नसकेको हो । गेम धेरै गराएर केही क्रिकेट, फूटबल लगायत खेलहरु चर्चामा छन् । टेवल टेनिसको गेमै नभएपछि मान्छेले विर्सीहाल्छ । नेपालमा पहिले टेवल टेनिसको गेम त्यति हुँदैन थियो । अहिले बढ्न थालेको छ । अहिले वर्षमा न्युनतम ६ सात वटा गेम हुन थालेको छ । अझै यसलाई धेरै गर्नुपर्छ ।
जतिपनि नेपालका राष्ट्रिय खेलाडी छन् उनीहरुमध्ये चयन गरेर विदेशमा प्रशिक्षणको लागि पठाउनुपर्छ । नेपालको मात्रै ट्रेनिङले पुग्दैन । अन्य खेललाई जस्तै टेवल टेनिसलाई पनि प्रथामिकता दिनुपर्छ । खेलकुद परिषदले यो खेललाई गम्भिरता पूर्वक लियो भने टेवल टेनिस माथि जाने संभावना छ । अहिले सम्म केही भएको छैन । सानो बलले के हुन्छ ? भन्ने सोच छ । जब मेडल आउँछ अनि थाहा हुन्छ ।